Uhlobo lweeMbasa zeMidlalo yeeMbasa ngamabhaso amatsha eMonotype | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Imithombo, Ezahlukeneyo
La I-typography ibaluleke ngaphezu kokubaluleka namhlanje kumaphepha okufika, iibhloko kunye nokunye, kodwa ayaziwa ngokwaneleyo kuyo yonke into esiyinika yona ngokwenene xa siza kwiwebhusayithi. Oko kubhalwa kuqala kuhlala kunikezelwa yileta kwaye yiyo eya kusikhuthaza ukuba siqale ukufunda umhlathi emva komhlathi.
Kule nto I-Monotype idale amabhaso ayo apho ezo nkampani zibheja ekuphuculeni iifonti zazo okanye ekwenzeni ezazo ezichonga uphawu ziya kuvuzwa. Siyazikhumbula ezi ntsuku emva kwale iphucule iTwitch ukuyenza ibe ngaphezulu kokugqibeleleyo.
Sithetha ngayo Uhlobo lweBhaso loKhuphiswano kwaye beza kuthi baqonde ezo ntengiso zigxininisa iifonti esiza kuthi emva koko sizibone kwiindawo ezininzi okanye nakwiphulo labo lokuthengisa.
I-Monotype ilungiselela ukumilisela inkqubo yamabhaso okuqonda eyona nto ilungileyo kuyilo lwe-typography kunye ne-brand identity. Awufuni kuphoswa zinkcukacha kule! #ukuyo #lungelo pic.twitter.com/QTktWn1btX
-Imonotype (@Monotype) Septemba 12, 2019
Yiyo i, ukuba iMonotype inoxanduva lokudala olo hlanga loyilo oko kuyakusinceda ekuchongeni iimveliso kunye neearhente eziyingcali ekuphuculeni iifonti zazo.
Kwaye inyani kukuba kukho iifonti setha iindlelaNgaphandle kokudityaniswa nophawu oluthile. Kukubona loo mthombo, kwaye sele sazi ukuba ngubani onokuwudibanisa. Kulapho umsebenzi wabo bayila amagcisa abazama ukubeka loo magophe koonobumba bangena ukuze masikhawuleze siyiqonde iDuolingo ngohlobo lwayo olutsha.
Monotype ivumela nawuphi na umyili, obonisa umsebenzi wakhe ngophawu, ukuba faka amagama abatyunjiweyo kwaye uphumelele elinye lamabhaso. Nangona awunyanzelekanga ukuba ubonise olo lwalamano ukuze uthathe inxaxheba kula mabhaso ohlobo.
Si nditsho nephepha lewebhu esinokuthi sisondele kulo ukwazi amabhaso kunye nomhla oza kubanjwa ngawo. Apha unayo kwiwebhu. Isindululo esingaphezulu komdla nesibalulekileyo sokukhanyisa kubona baqulunqi babalaseleyo kunye neempawu ezibeka uphawu kwimigca.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Monotype isungula amabhaso ayo okuzala ii-brand ezizinikeleyo kubuchwephesha
I-Adobe ibonisa umlingo wesixhobo se- "Content-Aware Gcwalisa"